Umdlalo omuhle kaRosko | Scrolla Izindaba
Umdlalo omuhle kaRosko
Kube yintokozo enkulu ukubona uRosko Specman eshayela i-Free State ama-try amathathu amahle bedlala ne-Western Province eKapa ngoMgqibelo!
Abathandi be-Sevens baziwa ngokuzibandakanya nokukholelwa (noma kuyiqiniso noma kungesilo) ukuthi abadlali abayi-15 bebhola lombhoxo abahamba phambili badlalela ama-Sevens ngempumelelo. Bame kwelokuthi ayikho indawo yokucasha enkundleni ye-Sevens.
“Isibonele nje ukube bekufanele udlalise, uMorné Steyn emdlalweni wama-sevens, yisiphi isikhundla obungamvumela ukuba asidlale?” bayahleka, bethi abadlali be-Sevens kufanele babhenamandla, bahlasele, bagijime, badlulele eceleni, badlulise ibhola, badlule futhi benze ezinye izinto, konke ngejubane elikhulu – hhayi ngokuzenzakalela wonke amakhono ongawahlanganisa nakaSteyn.
Bese kufika uRosko Specman athole ama-try amathathu amahle, asebenzise wonke amakhono akhe enze abadlali abaningi beSifundazwe saseNtshonalanga banqekuzise amakhanda ngokumangala futhi bengeze i-grist kubalandeli be-Sevens abajabulile.
Ngokwenzelela, bekuyimizamo ephelele yabesilisa abayi-15 abadlalela i-Free State yize bevumele amaphenathi amaningi kakhulu.
Lo mdlalo, owokuqala wesiFundazwe e-Cape Town Stadium ngemuva kokudayiswa kwenkundla yezemidlalo i-Newlands, uphele ngokuchibiyela, kunqoba i-Cheetahs ngamagoli angama-33-34.
Kweminye imidlalo ye-kick offs yowezi-2021 (ukulungiselela i-Rainbow Cup):
Ama-Lions 32-28 i-New Nations Pumas.
I-Vodacom Bulls 85-10 i-EP Izindlovu.
Umthombo wesithombe: @jayjbotes